Obbo BATTEE URGEEYSAA MIRGA WABIIN AKKA BAHAN MURTAAWE. | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ April 1, 2021 June 16, 2021
Qondaalli ABO Battee Urgeessaafi Konkolaachisaa Wandosen Abdulqaadir wabiidhaan akka gadhiifaman manni murtii ajaje.
Namoota hidhaman gaafachuuf gara magaala Buraayyuu deemanii ALI gaafa 11/07/2013 kan too’ataman qondaalli ABO Battee Urgeessaa Fi konkolaachisaan isaanii Wandosen Abdulqaadir har’a yeroo lammaffaadhaaf mana murtii Magaala Buraayyuutti dhihaataniiru.
Dhadhacha har’a oole kanaanis poolisiin, namootni kunneen waajjira poolisii dhufuun hokkora kaasaniiru, diina wajjinis qunnamtii qabu jechuun qorannoo gaggeessuu mana murtiitiif ibseera jedhan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa.
Abukaatonnis dhimma waajjira poolisiitti hokkora kaasuu jedhurratti poolisiin qorannoo taasise xumuree jira, diina wajjin qunnamtii qabu kan jedhummoo waan ifa hin taaneedha, kanaaf namoota kunneeniif mirgi wabii isaanii eegamuu qaba jechuun falmaniiru.
Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhagaheen booda dhadhacha 23/07/13 ooleen Obbo Battee Urgeessaa fi obbo Wandosen Abdulqaadir tokkoon tokkoon isaanii wabii birrii kuma shaniin akka gadhiifaman ajajeera jedhan.
Namoonni manni murtii mirga wabii fi bilisaan akka ba’an murteesse hedduunsaanii poolisiidhaan qabamanii mana hidhaatti deebifamuun baratamaa dhufeera.
Gaafa eebba Yuuniversitii Jimmaa kan qabame barataa Mahammad Deeksisoo yeroo lammataaf mirgi wabii eegamuufis poolisiin mana hidhaatti deebiseera.
A.L.I Guraandhala 6 bara 2013 manni murtii mirga wabii eeguufi hordofee Komiishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Mohaammad Deeksisoo hatattamaan akka gadi dhiifamu gaafachuun ibsa baasee ture.
Qondaaltonni ABO Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataas manni murtii erga bilisaan akka ba’an ajajee booda poolisiidhaan qabamanii hidhaa buufaman. Qondaaltota kunneenirratti kun yeroo lammaffaaf raawwate.
Naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun rakkoo mul’achaa jiru ta’uu Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa kanaan dura BBCtti himeera.
Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun akka malee yaaddessaa ta’uu ibsuun, furmaata atattamaa barbaada jedheera.